कथा संसार | साहित्य संसार
पाठकले जे भने पनि मलाई स्वीकार्य छ - समाश्री	भेटवार्ता - भगवती बस्नेत	नोष्टाल्जिया एक मिठो प्रेम र अनुभूति हो - लारा [LARA]	दर्शन र चिन्तनको गोठालो हुनुपर्छ आजका पाठक - समदर्शी काँइलासँग कुराकानी	फेसबुकको हल्लाखल्ला भर्चुअल मात्र हो - केदार संकेतसंग कुराकानी	साहित्य संसार लेखक सूची: कथा संसार
बिदाको सपना यामदास घायल 'सन्तलाल' प्रत्येक दुईहप्ताको कामपछि तेस्रो हप्ता आरामको लागि समय दिने मेरो कम्पनीले यो पटक पनि नियम अनुसार नै मलाई छुट्टि दिएको थियो। आकासले पनि आफ्ना नाङ्गा शरीर भरी दिनभरि सूर्यलाई नचाएर लागेको थकानलाई मेटाउनका लागि सुस्ताएको थियो मसङ्गै रातको छहारीमा । जसरी म सुस्ताइरहेको थिएँ आफ्ना […]
कथा: छोरीको जिन्दगी दिपा धिताल निता भर्खर सोह्र वर्षमा लागेकी थिई घरमा उसको बिहेको कुरा चलाइयो, उसले भनी म अँझै बिहे गर्दिन म धेरै पढ्न चाहन्छु । निताको कुरा सुनेर उसका बाबा आमाले भने – छोरी मान्छे बिहे गरेर जानुपर्छ उमेर पुगेपछि माइतीमै बस्यो भने समाजले कुरा काट्छ तैले अब […]
लघुकथा – हिन्दी भाषा राजु क्षेत्री 'अपुरो' उनले मलाई सुझाव दिए कि तपाइँका लेख रचनामा हिन्दीका शब्दहरू मिसिएका छन सुधार गर्नु होला । उनी मेरा एक असल पाठक मात्र थिएनन हितैषी पनि थिए । उनको सुझावलाई शिरोधार्य गर्नु मेरो कर्तव्य नै थियो । म आफू लामो समय भारतमा बसेको हुँदा बोलाइ र […]
लघुकथा:कर्मको खेल गोमा सिटौला उकाली–ओरालि र मेलापातमा भ्याइनभ्याई पसिना चुहाउन बिबश गाँउलेहरुलाई, यसपालि चुनावको माहोलले गर्दा,बाटोघाटो, चौतारा र कान्छिको चिया पसलमा निकै फुर्सदिलो र प्रसन्नताका साथ, झुन्ड–झुन्ड बसेर, ठूल्ठूला राजनीति गफ हाँकेको देख्दा, नेताहरुले “हाम्रो उद्देश्य नै तपाईंहरुको मुहारमा खुशी झल्काउनु हो भन्थे” सायद ‘खुशी’ भनेको यहि होला, मेरो […]
कथा – मायाको परिभाषा शारदा पौडेल मङ्सिर महिनाको घमाइलो दिन थियो । चारैतिरको कुहिरो फारेर घाम लागे पनि मेरो मनमा डम्म बादल लागेको थियो । जति मनलाई सम्झाउन खोजे पनि फिटिक्कै सम्झाउन सकेकी थिइन । छोराछोरीलाई भनौँ भने उनीहरूलाई मामाघर कहाँ हो ? मामा कतिजना छन् र कस्ता छन् भन्ने थाहासम्म […]
पश्चाताप कृष्ण के.सी. ‘म लड्दा तिमीले उठायौ भने, बिरामी हुँदा तातो पानी दियौ भने र म मर्दा एक तुर्को आँसु खसालिदियौ भने पो तिमी र म हुनुको अर्थ हुनेछ,’ एकै सासमा यति बोलिसकेपछि थाकेर गलेका आँखाले मलाई पुर्लुक्क हेर्‍यो । मन भक्कनियो । मुटु बेतोडले धड्कियो । फुङ्ग […]
लघु कथा :– घडी बन्द बिजु सुवेदी ‘विजय’ बिजु सुवेदी “विजय” जिउँदोमा काँध दिने कोही छैनन् बरिलै यो संसारमा । मरेपछि काँध दिन जो पनि तँछाडमछाड गर्छन् हरे ! धार्मिकताको यो कलङ्क स्वार्थी दुनियाँ ! हो दीपक छैन आज यो संसारमा । वर्षौं भयो उसको विश्वको नंबर एक स्वीस घडी बिग्रिएको । एउटा […]
लघुकथा :- परिणाम ईशा शाह ईशा शाह पशुपति गएकी श्रीमती हत्तारिंदै कोठा भित्र पसी । धेरैबेर भैसक्दा नि कोठाबाट निस्किने छाँटकाँट नदेखेपछि पढ्दै गरेको पत्रिका पन्छाएर म उठेर गएर कोठा भित्र यसो चिहाएँ । ऊ बिछ्यौनामा घोप्टो परेर रुँदैथिई । कुरा न कन्थो रुँदै गरेको देखेर आश्चर्य लाग्यो । सोध्ने […]
लघुकथा:- दुखी पिता हरिलाल बेदनाथ आचार्य " बेदु" बेदनाथ आचार्य ” बेदु” ************************ हरिलाल परदेश छिरेको दुई दशक पुरा भएछ।अहिले उनका छोराछोरी कलेज पढ्ने भए। छोराले पल्सर बाईकको माग गर्यो भने,छोरीले दादालाई बाइक हो भने मलाई आईफोन 6+ चाहिन्छ नत्र कलेज नजाने निर्णय गरिन। श्रीमतीले भन्न थालिन” यत्रो बर्ष परदेश बसेर छोराछोरीका माग […]
धोबिनी बाख्रो खगिन्द्रा खुसी “हैन आज यो बाख्रो चर्न गएन ?” दुवैहात पछाडि राखेर परबाट हेरेर सोधे बाबैले । “व्याउला जसतो छ अनि नपठाएको ।” आमैले उत्तर दिइन् । बाख्राको छेउमा गएर। वरिपरि घुमेर हेरे । “व्याउन त व्याउँछ होला पौंठा पनि वसिसकेछ । जात खाल त राम्रो हो […]
कथा – चिया दिने केटी कुमार काफ्ले शरद यामको ठण्डी बिहान । सडकमा कुकुरहरू भुकिरहेका थिए । कतै प्रत्येक घरमा त कतै बिराएर ऊ एकैक्षणका लागि साइकल रोक्थ्यो र बन्द पसलका सटरहरूमा , अफिस र घरका ढोकाहरूमा पत्रिका छिराइदिन्थ्यो । ग्राहक र पाठकहरूले भन्दा पहिले नै पत्रिका उसले छुन पाएपनि त्यसमा छापिएका […]
कथा – धुवाँ मातृका पोखरेल ‘फ्रष्टेड बौलाहा’ चोकको पूर्वपट्टि आएर उभियो । निर्माण पूरा हुन नपाउँदै अलपत्र परेको विवादित स्तम्भतिर फर्केर ऊ फेरि एकपटक जोडले हाँस्यो । ‘यहाँ सहिद स्तम्भ बन्नुपर्छ, कुनै भ्रष्टहरुको सालिक यहाँ बनाउन पाइँदैन ।’ उसले सबैलाई सुनाउन ठूलो स्वरमा करायो । यो चोक बजारमा त्यो बौलाहा […]
भाउजु सानु शर्मा “काका ! यो दाइ तपाईंलाई खोज्दै आउनुभा’छ,” मैले माइलो काकाको नातिले औंल्याएतिर हेरें । एकैछिन यस्तो लाग्यो, म ऐनामा आफैंलाई हेरिरहेछु । तर, होइन ! मेरो यो रूप कहिल्यै थिएन । मैले केही बोल्नुभन्दा पहिल्यै त्यो युवक मेरो खुट्टामा घोप्टियो । “को हौ बाबु ? […]
कथा : मालती दिपा धिताल कथा : मालती सबै महिलाहरु निर्दोष हुदैनन् र सबै पुरुषहरु पनी दोषी हुुदैनन् । कती महिलाहरुले जानी जानी आफ्नो भविष्य आफै विगारेका पनी छन् । कती पुरुषहरुले आफ्नो शक्ति उन्मादले गर्दा हिँस्रक घट्नाहरु घटाएर महिलाहरु माथि नै सिकार खेलीरहेका छन् । महिला अधिकार आयो भन्दैमा […]
घाइते विपना अनिल श्रेष्ठ पुष महिनाको बेलुकीको घामको स्पर्शले धर्तीलाई सुम्सुम्याएर सूर्य भर्खरै स्वयम्भु पारिको डाँडाबाट ओझेल प¥यो । सडकछेउमा आफ्नो ठेलागाडीलाई अड्याएर घामको न्यानो पाहार ताप्दै आफ्नो दुवै हत्केलालाई सिरानी हालेर सुतिरहेको धनेको शरीरले अब भने जाडोको महसुस ग¥यो । बतासिँदै आएको हावाको एउटा चिसो झोंक्काले ऊ ब्युँझियो […]
पेजहरू :1234567...15पछिल्लो »साहित्यसंसार डट कम
नेपाली साहित्यको सानो संसारसाहित्यिक अनलाइन पत्रिकाईमेल : info@sahityasansar.com